Cunto: Waxyaabaha asxaabta leh ee SEO-ga ah ayaa ka dhigaya Google Panda inuu kuugu jeclaado!
Haddii aad dhawaan soo-gashatay goob-dhismeed oo aad rabto inaad wax daabacato, fiiro gaar ah u yeelato tayada sare iyo qaladaadka aan khaladka laheyn waxay kordhin kartaa kalsoonidaada internetka. Waxaad ka abuuri doontaa gaadiid badan oo ka socda warbaahinta bulshada iyo Google haddii mawduucaagu uu yahay astaanta.
Jack Miller, Maamulaha Guud ee Macaamilka ee Sare Mareeyaha Guud ee Macaamilka, wuxuu aaminsan yahay in tayada maaddadu ay tahay meesha ugu muhiimsan ee diiradda saareysa haddii aad rabto inaad ka fogaato ciqaabta Google Panda iyo dhimista. Sababtoo ah Panda waa qayb ka mid ah darajada Google ee algorithm ee sannadka 2017.
Xooga saar Ammaanka:
Waa qasab in xooga la saaro dadka isticmaala marka ay timaado content iyo suuq-geynta warbaahinta bulshada - vps high ram. Qeybta hoose ayaa ah in dadka ay isku dayaan inay daabacaan ayna dhiirigeliyaan waxoogaa tayo leh, laakiin waa inaad diirada saartaa daabacaadda darajada sare iyo qoraallada gaarka ah. Marka la eego, dhammaan websaydhiyaadka iyo bloggers waa in ay fahmaan xeeladaha aasaasiga ah ee ku saabsan sida loo buuxiyo shuruudaha internetka, sababtoo ah albaabka guusha waxay furi karaan oo kaliya marka aysan ku lug laheyn tayada maadada
Qoritaanka maadada SEO-ku-saaxiibtinimo waxay noqotey daruuri maalmahan, qoraalka bogagga shabakadaada waa in lagu dhejiyaa iyadoo la adeegsanayo ereyo iyo ereyo sax ah.
Intee in le'eg ayaan ku qori karnaa inaan qoro?
Waa in aad qoreeysaa qoraalada ku yaala bogaga si aad uquruxsan oo ka fiican
John Mueller oo ka socda Google wuxuu sheegayaa in aysan jirin tira tira yar iyo diiradda qoraallada qoraaga waa inay ahaadaan tayada halkii aad tirin lahayd
Imisa Ayaanu Hagaajin Karnaa
Waxay sidoo kale ku xiran tahay waxyaabo yar, tusaale ahaan, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid Head of Your page. Hubi in aysan jirin nuqul ama joornaal, iyo content waxay u dhigantaa heerarka Google. Xaaladdan, waxay kuu sahlanaan doontaa inaad adigu wax ka qabato mawduuca.
Iska ilaali erayada muhiimka ah:
Qodobbada muhiimka ah waxay ka soo horjeedaan Google iyo tilmaamaha kale ee raadinta mashiinka! Intii aad walwal ka bixin laheyd ereyada muhiimka ah iyo ereyada, waa inaad bixisaa dareenka ugu sareeya si aad u bixisid content sax ah oo tayo leh. Qodobka muhiimka ah waa habka lagu soo celinayo isla erayga ama erayga la midka ah iyo weedhaada iyo wixii ka dambeeya mawduucaaga. Waxaa loo tixgeliyaa sida loola macaamilo madow SEO ah oo ka soo horjeeda shuruucda iyo xeerarka Google.
Tijaabada ugu horreysa ee "khibrad user" waa inaad ku xakameyso iyada oo ah mid tayo sare leh iyo isticmaalka ugu yar ee ereyada muhiimka ah. Waa inaad tixgelisaa waxyaabaha aad ka heleyso boggaaga, adoo hubinaya in tayada aysan wax khasaare ah u geysanayn kharash kasta maxaa yeelay waxa kaa caawin kara inaad ku noolaato natiijooyinka Google.